MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardBill payment by MPT Money Faq MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
၁။ ငွေတောင်းခံလွှာများကို MPT Pay ဖြင့် ပေးဆောင်နိုင်တယ် ဆိုတာ ဘာလဲ?
Postpaid နှင့် FTTH ၀န်ဆောင်မှု အမျိုးအစားအားလုံး၏ လစဉ်ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာ နှင့် ကနဦ: ငွေတောင်းခံလွှာ (OTI)များအား MPT Pay ကိုအသုံးပြုပြီး ငွေပေးဆောင်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု အသစ်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ငွေပေးချေမှု ဝန်ဆောင်မှု အသစ်ဖြင့် မည်သည့် လစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသလဲ ?
MPT Postpaid Service (PSTN, ADSL, GSM, CDMA, IPStar) နှင့် FTTH ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစားအားလုံး၏ လစဥ်ငွေတောင်းခံလွှာ နှင့် OTI ငွေတောင်းခံလွှာများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
၃။ MPT Pay ဆိုတာဘာလဲ?
MPT Pay ဆိုသည်မှာ မြန်မာပြည်အတွင်း အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ငွေလွှဲပို့နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ အကောင့်အတွင်း ငွေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေလက်ခံခြင်းများကို MPT Pay အကောင့်မှတဆင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ MPT Pay application အကြောင်းပိုမို သိရှိလိုပါက https://mptmoney.com.mm/ တွင်၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ: MPT Pay application ကိုလည်း Download ရယူနိုင်ပါသည်။
၄။ MPT Pay application ကို အသုံးပြုပြီး ငွေပေးချေမှု မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလဲ?
MPT Pay အသုံးပြုရန် User (သို့) Merchant (သို့) Agent အကောင့်များ ဖွင့်ပြီ: ငွေပေးချေမှုကို လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
၅။ MPT Pay ကို မည်သူတွေ အသုံးပြုလို့ ရနိုင်ပါသလဲ။ စာရင်းသွင်းရန် အတွက် ထပ်ဆောင်း၀န်ဆောင်ခ ပေးရန်လိုအပ်ပါသလား။
MPT Pay သုံးစွဲသူ အကောင့်ကို မည့်သည့် မိုဘိုင်း ဖုန်းနံပါတ်မဆို စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ Merchant (သို့) Agent အသုံးပြုသူများသည် MPT mobile SIM ဖြင့်သာ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ စားရင်းသွင်းရန် ၀န်ဆောင်ခ ထပ်ဆောင်းပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။
၆။ Postpaid (PSTN, ADSL, GSM/CDMA, IP Star) နှင့် FTTH ၀န်ဆောင်ဆောင်မှု လစဥ် ငွေတောင်းခံလွှာများ ပေးဆောင်ရန် အောက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပါ။
(၁) MPT Pay ၏ User အကောင့် အသုံးပြုပြီ: ငွေပေးချေမည်ဆိုလျှင် mobile number (09XXXXXXXXX) နှင့် password ကိုရိုက်နိုပ်ပြီ: user application ထဲသို့၀င်ပါ။ Agent အကောင့် အသုံးပြုပြီ: ငွေပေးချေမည်ဆိုလျှင် user name ၊ password နှင့် short code ကိုရိုက်နိုပ်ပြီ: agent application ထဲသို့၀င်ပါ
(၂) Home menu မှ “MPT ဘေလ်များ” ကို နှိပ်ပါ။
(၃) “Account Code”, “Invoice Number” နှင့် ပေးဆောင်မည့် ငွေပမာဏ “Amount” ရိုက်ထည့်ပါ (သို့) လစဥ်ဘေလ်တွင် ပါ၀င်သော QR code ကို QR scan ဖတ်ပြီး “Account Code” နှင့် “Invoice Number” ကို အလိုအလျောက်ဖြည့်ပြီး ပေးဆောင်မည့် ငွေပမာဏ “Amount” ရိုက်ထည့်ပါ။
(၄) အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ပါက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် “Proceed” ကို နှိပ်ပါ။
(၅) MPT Pay မှ ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်ကြောင်း ကို “Success/ Failed” status နှင့်တကွ ဖြည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များကို ပြပေးပါမည်။ ငွေပေးချေမှုအတွက် Postpaid နှင့် FTTH services ကို စာရင်းသွင်းပြီ: အတည်ပြုထားသော မိုဘိုင်းဖုန်းထံသို့ SMS ရရှိပါလိမ့်မည်။
၇။ OTI ငွေတောင်းခံလွှာများကို MPT Pay ဖြင့် မည်သို့ ပေးဆောင်နိုင်ပါသလဲ။
အထက်ပါ နံပါတ် ၇ အချက်အလက်အတိုင်း ငွေပေးချေမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကနဦ: ငွေတောင်းခံလွှာ (OTI)များကို ပေးဆောင်လျှင် ကျသင့်ငွေကို အပြည့်အ၀ပေးချေရပါမည် သို့မဟုတ်ပါက MPT Pay မှ “Failed” ဟု status ပြပြီး အပြည့်အ၀ပေးဆောင်ရန်အတွက် ကျသင့်ငွေပါ ပြပေးပါမည်။
၈။ ငွေပေးချေပြီးပါက အောင်မြင်ခြင်း ရှိ မရှိ ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲ?
MPT Pay မှ ငွေပေးဆောင်မှုအချက်အလက် စစ်ဆေးပြီးပါက “Success/ Failed” လို့ပြပေးပါမည်။ ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်ပါက MPT မှ ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း SMS ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၉။ အကယ်၍ ဆားဗစ်နံပါတ် (သို့) အကောင့်နံပါတ် မှားယွင်းပေးဆောင်မိရင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ ?
MPT Pay call center (990 or 01-2323990) ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီ: မိမိ လက်ခံရရှိသော SMS ကို ပြသပါ။
၁၀။ ငွေပေးချေပြီးသော်လည်း SMS မရရှိပါက မိမိ ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်/မအောင်မြင် ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲ ?
MPT Pay call center (990 or 01-2323990) သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ လည်းကောင်း၊ နီးစပ်ရာ MPT ၏ ငွေလက်ခံကောင်တာများ TRA တွင် လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ MPT Pay application ၏ “Transaction History (လုပ်ဆောင်ချက် မှတ်တမ်း)” မှတဆင့် မိမိငွေပေးချေခဲ့သည့် ရက်ဖြင့်လည်း ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၁။ ဆက်သွယ်ရန်နံပါတ် ပြောင်းလဲချင်ပါက ဘယ်လို ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ ?
106 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ လည်းကောင်း၊ နီးစပ်ရာ MPT ၏ ငွေလက်ခံကောင်တာများ TRA တွင် လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁၂။ ကိုယ်စား ငွေပေးချေနိုင်ပါသလား။ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ?
ကိုယ်စား ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ငွေပေးချေမည့် ဝန်ဆောင်မှု နံပါတ်၏ အချက်အလက်များ ဥပမာ- ငွေတောင်းခံလွှာအမှတ်၊ ငွေစာရင်းအမှတ်၊ ပေးဆောင်မည့် ငွေပမာဏ စသည်တို့ လိုအပ်ပါသည်။
၁၃။ ငွေပေးချေရန် အချိန် ကန့်သတ်ချက် ရှိပါသလား?
ဤငွေပေးချေမှုသည် အချိန် ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး အချိန်ကုန်သက်သာစေသော အွန်လိုင်း ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
၁၄။ ငွေပေးသွင်းရက် ကျော်လွန် ၍ လိုင်း ဖြတ်တောက်ခံရပါက ငွေသွင်း၍ ပြန်လည်လိုင်းဖွင့်ရာတွင် ပေးသွင်းပြီး အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလှ့ျင် လိုင်းပြန်ဖွင့်ပါသလဲ?
ပေးရန်ကျန်ရှိသော ကြွေးကျန်များ အားလုံးကို ပေးသွင်းပြီးပါက ၂ရက်မှ ၃ရက် (အလုပ်လုပ်ရက်) အတွင်း ဖြတ်တောက်ထားသော လိုင်းကို ပြန်လည် ဖွင့်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၅။ ငွေပေးသွင်းပြီးသော်လည်း လိုင်းပြန် မပွင့်ပါ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
သင့်ငွေပေးချေမှုကို အပြည့်အ၀ ငွေပေးချေမှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးပါ။ ငွေတောင်းခံလွှာအတိုင်း အပြည့်အ၀ ပေးချေပြီးနောက် လိုင်းပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
၁၆။ အကယ်၍ မိမိ ဝန်ဆောင်မှု လိုင်းအား ယာယီပိတ်သိမ်း ထားသော်လည်း ငွေပေးဆောင်ရန် ကျန်ရှိပါက ယခုငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအသစ် ဖြင့် ပေးဆောင်နိုင်ပါသလား?
မည်သည့် အကြောင်းအရာဖြင့်မဆို လိုင်းယာယီပိတ်ထားသော်လည်း ယခု ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း အပါအဝင် ယခင်ချယ်နယ် အားလုံးမှ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။ ငွေပေးချေမှု ပြီးစီးပါက လိုင်းအလိုအလျောက် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ချွင်းချက် အနေဖြင့် မိမိဆန္ဒဖြင့် ယာယီပိတ် လျောက်ထားသော လိုင်းများအနေဖြင့် MPT ကော်မာရှယ် ရုံးများတွင် လိုင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် လျောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
၁၇။ အကယ်၍ လိုင်းအပြီးပိတ်သိမ်းထားသော်လည်း ပေးသွင်းရန် ကျန်ငွေရှိပါက ယခု ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်း အသစ်ဖြင့် ပေးချေနိုင်ပါသလား ?
မည်သည့် အကြောင်းအရာဖြင့် ဖြစ်စေ လိုင်းအပြီး ပိတ်သိမ်းထားသော်လည်း ငွေပေးချေလိုပါက ယခု ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအသစ် အပြင် ယခင်ချယ်နယ် အားလုံးမှ ပေးချေနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အပြီးပိတ်လိုင်းများအား ပြန်လည် အသုံးပြုလိုပါက MPT ကော်မာရှယ် ရုံးများသို့ သွားရောက် လျောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
၁၈။ ငွေတောင်းခံလွှာ ပမာဏထက် ပိုပြီး ငွေပေးချေပါက ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါသလဲ?
ငွေတောင်းခံလွှာပမာဏထက် ပိုမိုပေးဆောင်ပါက ပိုနေသော ငွေပမာဏအား သုံးစွသူ၏ ငွေစာရင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
-သုံးစွဲသူမှ ပေးဆောင်ရန်ကျန်ငွေ မရှိပါက သုံးစွဲသူ၏ အကောင့်တွင် ကြိုတင်ငွေအဖြစ် ထည့်သွင်းပေးသွားပါမည်။
-သုံးစွဲသူမှ အခြားငွေတောင်းခံလွှာများအတွက် ပေးဆောင်ရန်ရှိပါက ကျန်ရှိသော ငွေဖြင့် ပေးချေသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၉။ ငွေတောင်းခံလွှာပမာဏ အောက် လျော့နည်းပြီး ငွေပေးချေပါက ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါလဲ?
MRC ငွေတောင်းခံလွှာပမာဏအောက် လျော့နည်းပြီး ငွေပေးချေပါက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငွေပေးချေမှု အဖြစ် လက်ခံပါမည်။ သင့်အနေဖြင့် ပေးဆောင်ရန်ကျန်ငွေများအား အလုံးစုံ ပေးချေရန် လိုအပ်ပြီး ပေးဆောင်ရန်ကျန်ငွေပမာဏ မည်မျ နည်းသည်ဖြစ်စေ ငွေပေးချေရမည့်ရက် ကျော်လွန်ပါက လိုင်းယာယီဖြတ်တောက်မှု ခံရနိုင်ပါသည်။
ကနဦ: ငွေတောင်းခံလွှာ(OTI) ပမာဏအောက် လျော့နည်းပြီး ငွေပေးချေမှုကို MPT Pay မှတဆင့် လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် ပေးဆောင်ရန်ကျန်ငွေများအား အပြည့်အ၀ ပေးချေရန် လိုအပ်ပြီး ပေးဆောင်ရန်ကျန်ငွေပမာဏ မည်မျ နည်းသည်ဖြစ်စေ ငွေပေးချေရမည့်ရက် ကျော်လွန်ပါက လိုင်းယာယီဖြတ်တောက်မှု ခံရနိုင်ပါသည်။
၂၀။ ပေးဆောင်ရန်ကျန်ငွေ မရှိဘဲ ငွေပေးချေပါက ဘယ်လို ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ?
ပေးသွင်းသောငွေ အားလုံးသည် ကြိုတင်ငွေ အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။